Shiinaha 48V500W 12T Warshadaha Xakamaynta iyo Warshadda | LEEK
Tilmaamaha Magaca Shayga: 48V650W 12Tube Controller oo ku hoos jira danab: 41.5V ± ± 0.5V rent Hadda: 31A (± 1A) Cabbirka: 26.5 CM*13.5CM*5.5CM (Cabbirka Sanduuqa) Isticmaalka: Loogu talagalay xirmada baabuurka rickshaw dhibcaha danab ee aadka u hooseeya waxay bixiyaan hufnaan sare iyo qalliin aamusan. Kordhinta iyo fiilooyinka fudud ee leh isku xirayaasha riixaya ee loogu talagalay calaamadaha kontoroolka iyo basaska naxaasta adag ee isku xirka korontada. La jaan qaada labada potentiometer ama silsilad danab. Cillad ceejinta ...
Magaca Shayga: 48V650W 12Tube Controller
Danab hoos: 41.5V±0.5V）
Hadda: 31A (±1A)
Cabbirka: 26.5 CM*13.5CM*5.5CM (Cabbirka sanduuqa)
Isticmaalka: Loogu talagalay xirmada mootada rickshaw pedal
Beddelidda-soo noqnoqoshada sare iyo dhibcaha danab ee aadka u hooseeya waxay bixiyaan hufnaan sare iyo hawlgal aamusan.
Kordhinta iyo fiilooyinka fudud ee leh isku xirayaasha riixaya ee loogu talagalay calaamadaha kontoroolka iyo basaska naxaasta adag ee isku xirka korontada.
La jaan qaada labada potentiometer ama silsilad danab.
Wareegga ilaalinta khaladka ceebta ayaa curyaamiya xakamaynta haddii fiilooyinka ceejintu furmaan.
Astaamaha curyaaminta lugta sare waxay ka hortagtaa hawlgalka xakamaynta haddii furaha la shido halka ceejinta la adeegsanayo.
Bareesada diode -ga bareegga gudaha koontaroolaha.
Ilaalinta kuleylka iyo wareegga magdhowgu wuxuu bixiyaa xad joogto ah oo joogto ah marka loo eego baaxadda hawlgalka iyo inta lagu jiro hoos -u -dhaca heerkulka hoos/hoos; lama waayo awood si lama filaan ah xaalad kasta oo kulayl ah.
Hoos -u -shaqaynta dhimista danabku waxay ka ilaalisaa danab batari oo hooseeya, oo ay kujirto danab hoose oo ay keento culeysyo dibadeed.
Si sahal ah ayaa barnaamij looga dhigi karaa iyada oo loo marayo CURTIS Model 1313-4331 Programmer Hand-held ama 1314 PC Programming Station.
Guriyeynta aluminiumka anodized ah ee gurigu ka soo baxay ayaa buuxisa heerarka IP65 ee xiritaanka deegaanka si loogu isticmaalo deegaannada qallafsan.
Xirmada CKD waxaa lagu buuxiyaa kaartoon iyo xirxirida SKD waxaa sida caadiga ah lagu buuxiyaa alwaax ama bir. Haddii ay jiraan shuruudo gaar ah, fadlan la hadal qofka wax iibiya.
Waaxda 1.R & D ： Waxaan leenahay koox R&D oo xoog leh oo leh waayo -aragnimo sanado badan leh meelaha sida korontada, elektiroonigga, softiweerka, mashiinnada, otomaatiga, iwm.
2.Xarunta Waxsoosaarka: Qalab dhammaystiran oo ah qalabka wax lagu farsameeyo ayaa dammaanad qaadi kara saxnaanta; Nidaamka dhejinta siligga tooska ah ee horumarsan waa in la hubiyo joogtaynta; Khadka wax-soo-saarka ee Semi-automatic wuxuu hagaajin doonaa wax soo saarka.
3.Motor Production: Semi-automatic line-soo-saarka: in ka badan 80% otomaatig; 60 qaybood oo hal wareeg ah; wax soo saarka sanadlaha ah: 15,000; ugu badnaan wax soo saarka sanadlaha ah: 45,000 set
4.Controller Production: Semi-automatic control line line production: in ka badan 80% automation; 100 unug hal wareeg ah
Maaraynta Tayada: Waaxda hubinta tayada ayaa kormeeri doonta habka wax soo saarka iyo qalabka imtixaanku wuxuu caymin karaa tayada alaabta.
Hore: 48V750W 15T Maareeyaha
Xiga: Xidhmada Baabuurka Pedals Rickshaw
E Biyo -mareenka, Baaskiilka Buluuga ah ee Fudud, Cidhiidhiga Baaskiilka, 22.5 Daboolida Gawaarida, Puck Side Stand, Best Battery Battery Charger Battery,